Rita, Writing for My Sake!: The Mask
Posted by Rita at 11/15/2009 11:32:00 PM
Let me send some links for you.
who is Bino to call you "BABY" ??
I would to send some link of novel (translation).
Sorry I still busy due short voyage.
You can go BurmeseClasses and explore to Mya Than Tint "Crying under the Derk"
The another one is Jack London's "Sea Wolf"
ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့က ကိုယ်လိုလူ တစ်ချို့ အတွက် တော်တော်ခက်တယ်.. လုပ်နိုင်တဲ့ လူတွေက လေးစားစရာပါ..
ဘာခံစားချက်တွေရှိလို့ ဘာတွေ ထိန်းချုပ်ရခက်နေတာပါလိမ့်။ အားလုံးက ဖြစ် ပျက် တွေချည်းပဲလေ။ တချိန် ချိန်မှာ အားလုံးကို ခွဲသွားရမှာပဲမဟုတ်လား
စာတော့ သေချာ မဖတ်ဘဲနဲ့။
ဘယ်မှာ ထိန်းချုပ်ရခက်တယ် ပြောထားလို့လဲ။
17 Nov 09, 08:28
Pauk: ကိုယ်က အသည်းငယ်ပါတယ်။။ ပို့စ်ကို ဖတ်မိတော့ ပိုငယ်သွားပြီ။။
thanks for ur post. i get something from ur post.
ညီမရေ… အမကတော့ ကြောက်လဲ ကြောက်တယ်… လန့် လဲ လန့် တယ်… ပျော်လဲ ပျော်တယ် လူအတော်သိတယ်… ဒါလေးဖတ်ပြီး သားလေးဗိုက်ခွဲမွေးတုန်းက အမအမျိုးသားခွဲခန်းထဲ ၀င်လာပြီး အမကို အားပေးဖို့လက်လာကိုင်တော့ သူ့ လက်ကြီးအေးစက်နေတာကို သတိသွားရမိတယ်… သူ့ မျက်နှာကတော့ ပြုံးပြီး ကိုယ့်ကို အားပေးနေတာ သိလား….
လူတယောက်ဟာ မာကျောတယ် ပြင်းထန်တယ်လို့ ထင်ရရင် အဲဒါ သူတို့ရဲ့ မသိစိတ်ထဲကနေ ပျော့ညံ့နေတဲ့စိတ်၊ တုန်လှုပ်နေတဲ့စိတ်၊ ခံစားလွယ်တဲ့စိတ်တွေကို ကွယ်ဝှက်ထားတာ....
ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဆိုတာ နေရာတကာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ ကိုယ်ထင်တာပဲ...။
To whom it may concern... :-P
ဒါကို Emotional Intellegence လို့ အစ်မတို့ တက္ကသိုလ်မှာ သင်ရပါတယ်။ Professional တိုင်းဟာ Emotional Intellegence ရှိရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီ သင်ခန်းစာကို သင်ရပြီးမှ Emotional Intellegence ဟာ တကယ်တော့ လိုအပ်တဲ့ အရာတခု ဆိုတာ လက်ခံပြီး ကိုယ်ကတော့ ဟန်ဆောင်တာကို သိပ်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ အစွဲဟာပျောက်သွားတယ်။